DONGGUAN JINRONG aluminium ALAABADA CO., LTD. waa soo saaraha xirfadle ku takhasusay baaraandegidda profiles daawaha aluminium iyo profile taageero of tube LED cilmi caaryada China.We Set iyo horumarinta, design, aluminium processing qoto dheer iyo daaweynta dusha ka mid ah, waxaan heysanaa koox mideysan farsamo la soo saarka sare iyo wax soo saarka baahida sare line, Dhammaan waxyaabaha our maray ISO shahaado nidaamka tayada ee caalamiga ah.
Iyada oo si joogto ah horumarinta our farsamo iyo hal-abuurnimo ability.We ku jira booska ugu horeeysa ee processing oo qoto dheer oo aluminium waxyaabaha warshadaha iyo deegaanka dusha saaxiibtinimo waxyaabaha aluminium technology.Our daaweynta ayaa si weyn loo codsatay in beeraha kala duwan ee suuqyada maxalliga ah iyo dhoofiyo Singapore, Malaysia, Thailand, Germany iyo wadamo kale iyo gobollada.
"Marka hore Quality, sumcad ugu horeysay" waa philosophy.We ganacsi ay bixiyaan alaabta oo tayo sare leh iyo adeegyo tayo leh our macaamiisha cusub iyo wax duug ah.
OEM / Habayn / Adeegyada Machining Waayo Doorashada:
1.Design/Manufacture caaryada aluminium, sameeyo maxkamad caaryada
2.OEM profiles aluminium aad codsan
3.we siin karaan anodizing iyo daaweynta dusha
4.we dalab machining tayada ama shaqo processing at qiimaha la awoodi karo, sida goynta, feedh, jediyay, qodista, iwm
midabka 5.Any loo heli karaa wax aluminium
6.Design/package qaybo aluminium sida codsiga macaamiisha ah ee
Tani waa wax soo saarka cusub qaadashada.
Haddii aad tahay xiisaha producsts our, waxaad ii soo xiriiri kartaa jidka xiriir hoos by:
Waxaan ku siin OEM ah / Habayn adeegyada profiles aluminium, sida saxanka kulaylka, qayb ka jediyay, tube aluminium ay hogaaminayaan, profiles caadiga ah non-warshadaha iwm Marka hore, waxaad ka fiirsan doonaa in la sameeyo tijaabada, waxaad siin kartaa sawiro ama Dakatu noo falanqayn. Sidoo kale aad saamiga aad ku samaysay noo ah in la ogaado in aad codsi u diro. Adiga kaliya ayaa loo xaqiijiyo gaaridda tijaabada, waxaan sii wadi galay wax soo saarka mass waxaad codsan kartaa.